News Collection: कुन देशका महिला सबैभन्दा धोकेबाज ?
कुन देशका महिला सबैभन्दा धोकेबाज ?
विश्वमा सबैभन्दा धोकेबाज महिला कुन देशका होलान् ? कुन देशका पुरुषहरुले प्रेमिकाबाट सबैभन्दा बढि धोका खानु परेको होला ? सायद धोका खानेहरुका लागि आफुले पाएको धोका सबैभन्दा ठूलो लाग्छ र आफ्नै देशका महिलालाई सबैभन्दा धोकेबाज ठान्छ । तर एक अध्ययनले भने अफि्रकी देश घानाका महिलाहरु सबैभन्दा धोकेबाज रहेको देखाएको छ ।
कण्डम उत्पादक कम्पनी ड्युरेक्सले विश्वका ३६ देशका २९ हजार महिलामा गरेको अनलाइन सर्भे अनुसार ६२ प्रतिशत घानाका युवतीहरुले आफ्नो प्रेमी वा पार्टनरलाई धोका दिने गरेका छन् । धोकेबाज युवतीको दोश्रो स्थानमा थाइल्याण्डका तरुनीहरु छन् । सयमा ५९ जना थाइ महिलाहरुले आफुले आफ्नो पार्टनर वा प्रेमीलाई धोका दिने गरेको स्विकार गरे ।
विश्वमा सबैभन्दा धोकेबाज महिलाको तेश्रो स्थानमा भने मलेसियाली महिला परेका छन् । ३९ प्रतिशत मलेसियाली महिलाले आफ्नो पार्टनरलाई धोका दिने गरेको पाइएको छ ।
धोकेबाज महिलाहरुको चौथो स्थानमा रुसी महिला परेका छन् भने पाचौ स्थानमा सिंगापुरे महिला छन् ।
यता प्रेमिप्रेमीका दुबैले एक अर्कालाई धोका दिने मामिलामा भने थाइल्याण्डका तरुनी तन्नेरी एक नम्बरमा छन् । दोश्रो नम्बरमा दक्षिण कोरियाली तन्नेरी छन् भने तेश्रो स्थानमा मलेसियाली छन् ।
यस्तै एसियाली पुरुषमध्ये बढि केटी फेर्ने मामिलामा भने सिंगापुरे र हंगकंगका पुरुषहरु एक नम्बरमा छन् । त्यहाँका पुरुषहरुले आफ्नो जिवनकालमा औषतमा १६ जना केटीहरुसँग मस्ती गर्न भ्याउँछन् ।